Design Printing Services, GPS
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကားနဲ့ကိုက်ညီစေမယ့် GPS စက်ဆိုတာ ဒီလိုစွမ်းရည်တွေရှိဖို ့လိုတာပေါ့👍👍
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကားနဲ့ကိုက်ညီစေမယ့် GPS စက်ဆိုတာ ဒီလိုစွမ်းရည်တွေရှိဖို့လိုတာပေါ့👍👍
1. ကားရောက်ရှိနေသည့် နေရာ၊ လမ်းကြောင်းကို Real Time ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
3.နယ်နမိတ်၊ ဧရိယာသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။ သတ်မှတ်နယ်နမိတ်ကျော်လွန်ပါက အချက်ပေးနိုင်ခြင်း
5.တစ်ဦးတစ်ယောက်မှကားမောင်းသွားပါက ဖုန်းသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် စက်ရပ်သွားအောင်ဆီလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ပေးနိုင်ခြင်း
7.တုန်ခါမှုများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးဖြတ်တောက်နေခြင်းများရှိပါက အချက်ပေးခြင်း
8.SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း တို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားသူများ မှာယူတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဖုန်းနံပါတ် 09774204020, 09775204020 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်...
Comment နှင့် Message တို့မှလည်း မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မိမိတို့ရဲ့ သားသား၊မီးမီးတွေကို ဘယ်တွေသွားနေမလဲဆိုတာ စိတ်မပူရအောင် Mini GPS လေး ထည့်ပေးလိုက်နော်. ..
သားသားမီးမီးလေးတွေကျောင်းထဲမှာပဲရှိနေသလား၊ အပြင်ပဲထွက်ဆော့နေသလား၊ ဘယ်တွေရောက်နေလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတာလဲ စတဲ့ မိဘများရဲ့ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ စက်လေးကို D PS မှာ ရရှိနေပါပြီနော်...
နယ်နမိတ်ဧရိယာသတ်မှတ်ပေးထားပြီး သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာကျော်လွန်သွားခဲ့ပါက မိမိရဲ့ ဖုန်းမှာ အချက်ပေးသံလာမြည်ပေးနေမှာပါ။ သားသားမီးမီးလေးတွေရောက်ရှိနေသည့်နေရာတိုင်းကိုလည်း ကြည့်နေလို့ရလို့ မိမိရဲ့ ကွယ်ရာမှာရောက်နေတဲ့ သားသားမီးလေးတွေအတွက် စိတ်မချမဖြစ်ရတော့ဘူးပေါ့.... ပိုထူးခြားနေတဲ့ အချက်လေးကတော့ အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုဖို့ SOS ခလုတ်လေးပါပြီး နှိပ်လိုက်ရင် မိမိဖုန်းဆီ အချက်ပေးပါတယ်။ မိမိက မက်ဆေ့လေးနဲ့ စာလှမ်းပို့ပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အသံများကိုပါ နားထောင်လို့ရပါသေးတယ်။ အရွယ်အစားကလည်း ရေသန့်ဘူးအပိတ် လောက်လေးဖြစ်လို့ ကျောပိုးအိတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ကွန်ပါဘူးတို့အတွင်းမှာ အလွယ်တကူသိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ ကလေးများအတွက်သာမဟုတ်ပဲ ကားများလူကြီးများအတွက် သုံးရင်လည်း အလုပ်လုပ်ပုံခြင်းကလည်း အတူတူပါပဲ။ Mini GPS စက်လေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်အရောက်ပို့ပေးနိုင်လို့ အခုပဲ မှာယူလိုက်တော့နော်....
ဆက်သွယ်မှာယူရန်-Phone-09- 774 204020, 775 204020
Address-Rm:307,3rd Floor, Yae Kyaw Complex, Yae Kyaw Road, Pazundaung Township, Yangon,
#photo credit_ google
💎တစ်ချို့ မိတ်ဆွေတို့က သံလိုက်ပါတဲ့ GPSကိုကြိုက်ကြတယ်... တချို့တွေကတော့ ကားမှာတစ်သမတ်တည်း တပ်ထားရတဲ့ GPS မျိုးလေးတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ်💎
ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဖုန်းအားသွင်းလို့လည်းရမယ် ၊ ကားရောက်ရှိနေမည့်နေရာကိုလည်း အင်တာနက်ဖြင့် ကြည့်နေနိုင်လို့ရမယ့် GPS စက်လေးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်🤫🤫 Spy GPS အဖြစ် ကားတော်တော်များတပ်ဆင် အသုံးပြုလာကြပြီး SOS အရေးပေါ် အချက်ပေး စနစ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ Recording စနစ် ပါရှိသောကြောင့် ကားအတွင်းက အသံများကို ကြားနိုင်ပါတယ်။ Sim card ထည့်သွင်း အသုံးပြုရန်သာ လိုပြီး၊ အားသွင်းရန် USB Charger (2)ခု ပါဝင် ပါတယ်။ အသုံးတည့်စေမည့် GPS စက်လေးဖြစ်လို့ Comment, Message တို့မှ တစ်ဆင့်မေးမြန်း ဝယ်ယူလိုက်ပါနော်....
💯လက်ကိုင်အိတ်၊ကျောပိုးအိတ်တို့မှာ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်မယ့် ပေါ့ပေါ့ပါ့ပါး GPS Tracker💯💎
ခရီးတွေသွားရင်းလက်ကိုင်အိတ်လေးမှာပဲချိတ်ဆွဲထားမလား၊ကားထဲမှာပဲထားမလား ၊ ဘယ်နေရာပဲထားထား ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလုံးဝမဖြစ်စေမှာအမှန်ပါ။ Battery အားအနေနဲ့ကရော အဆင်မပြေမှာစိတ်ပူနေလား? Battery အတွက်စိတ်ချ တစ်ခါအားအပြည့်သွင်းပြီး2ပတ်လောက် ပြန်သွင်းစရာမလိုပါဘူး ။ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကလည်း လျှော့မတွက်စေလိုပါ။ 1. မိမိရောက်ရှိနေသည့် နေရာ၊ လမ်းကြောင်းကို Real Time ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း 2.နယ်နမိတ်၊ ဧရိယာသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။ သတ်မှတ်နယ်နမိတ်ကျော်လွန်ပါက အချက်ပေးနိုင်ခြင်း 3.သွားခဲ့သောလမ်းကြောင်း၊နေရာများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်း 4.အသံမက်ဆေ့ပေးပို့နိုင်ခြင်း 5.တုန်ခါမှုများ၊ဘတ္ထရီအားနည်းခြင်းများကို အချက်ပေးခြင်း အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ ခရီးသွားခဲ့ရင် မိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာဆောင်ယူသင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ ကားနှင့်သွားရင်လည်း ကားကိုအဝေးတစ်နေရာမျိုးရပ်ထားခဲ့လို့ စိတ်မချတာမျိုးဖြစ်ရင်လည်း အသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော်။ 💥GPS Tracker လေးအကြောင်း စိတ်ဝင်စားရင် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်။Comment လေးမှာ သိလိုသည်များမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။💥
Real Time Car GPS
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ ယာဉ်အစီးရေများလာတာနှင့်အမျှယာဉ်မတော်တဆမှုများ ပိုများလာလို့နေပါတယ်။
မတော်တဆမှုတွေ မဖြစ်ပွားစေဖို့ အမြဲသတိနှင့် မောင်းနှင်နေရတာကတော့ ယာဉ်မောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ မိမိဘက်က ကားကိုသတိနဲ့မောင်းနှင်နေပေမယ့် သတိမမူသည့်ယာဉ်မောင်းများနှင့် တွေ့သည့်အခါ မတော်တဆမှုဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါမျိုးမှာ မိမိဘက်ကလမ်းမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို ထောက်ခံပေးနိုင်ဖို့ မှတ်တမ်းတင်ပေးထားမယ့် ကင်မရာတစ်ခုတော့ ရှိကိုရှိသင့်ပါတယ်။ ကင်မရာဆိုတော့ လူကရိုက်ပေးရမာလားမေးရင် မဟုတ်ပါဘူး ယာဉ်မောင်းရဲ့ဘေးနားမှာ တပ်ထားလိုက်ရုံနှင့် ရှေ့မြင်ကွင်းရော အတွင်းမြင်ကွင်းရော ကြည်လင်တောက်ပစွာ မှတ်တမ်းတင်ပေးနေမှာပါ။ နောက်ရောမြင်မှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ နောက်မှာတစ်လုံးတပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ယုန်ငယ်တစ်ကောင်ဖြတ်သွားရင်တောင် မှတ်တမ်းတင်ပေးသွားမှာပါနော်။ Live View အနေနဲ့ ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် မြင်ကွင်းအစုံကို အဝေးမှ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး GPS Tracking စနစ်ပါလို့ ကားကိုဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကအစ မြေပုံပေါ်မှာကားလေးတစ်စီး ရွေ့နေတာကိုပါ မြင်ရပါအုံးမယ်။ ယာဉ်တိုင်းမှာတပ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်တာမလို့ တပ်ဆင်ချင်လို့ မှာယူမယ်ဆိုရင် GPS ပစ္စည်းအစုံရနိုင်တဲ့ DPS မှ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ကြဖို့ 09774204020 /09775204020 တို့ကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော်။်....
Good Spots To Setup A GPS
GPSစက်လေးတော့တပ်ချင်တယ် တပ်ထားတာကို ဘယ်သူမှမသိအောင် ဘလိုလုပ်ရမလဲ?ု့နေပါတယ်။
GPS Trackerလေးတွေကိုအလွယ်တကူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာများမှာ တပ်ဆင်တာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားကို ပိုပြီးလုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ မိတ်ဆွေရဲ့ကားကို ခိုးယူခဲ့ရင် အလွယ်တကူ GPS Tracker ကိုမြင်ပြီး ဖယ်ရှားကောင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့် GPS Tracker လေးများကို သိုဝှက်စွာတပ်ဆင်ခြင်းကအရေးပါလှသောကြောင့် တပ်ဆင်သင့်သောနေရာလေးများကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1.Dashboard ရဲ့အတွင်း (Inside the dashboard) ဘတ်ထရီနဲ့ချိတ်ဆက်ရတဲ့ GPS Trackerလေး (သို့မဟုတ်) အားသွင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ GPS Tracker လေးများကို တပ်ဆင်ထားလို့ရပါတယ်။
2.ကားရဲ့ဝမ်းဗိုက်အောက်ဘက် (On the undercarriage) GPS Trackerလေးတွေမှာပါတဲ့ သံလိုက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကပ်ထားလို့ရပါတယ်။ DPS မှာ သံလိုက်ဆွဲအားကောင်းပြီး ရေစိုခံနိုင်တဲ့GPS Tracker နဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်။
3.ရှေ့(သို့) နောက်ဘမ်ဘာ (In the front or rear bumper) ဤနေရာသည် လူအတော်များများသတိမထားမိသည့်နေရာဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်ထားဖို့အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
4.ဘရိတ်ကားမီးအတွင်း ( Inside the brake lights) ဤနေရာအတွင်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင် GPS စက်ကိုအလွယ်တကူမမြင်နိုင်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်။
5. ကားထိုင်ခုံကူရှင်အတွင်း (Insideacar seat cushion) ယခုနည်းကတော့ ကားကူရှင်အတွင်းကို mini gps စက်လေးထည့်ပြီး ချုပ်ထားရမှာပါ။
6.နေကာ အတွင်း(In the sun visors) ဤနေရာကလည်း mini gps tracker လေးကို ဖောက်ထည့်ပြီးချုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
7.နောက်ထိုင်ခုံ(Behind the back seat) တချို့နောက်ထိုင်ခုံတွေမှာ ခေါက်လို့ရတဲ့လက်မောင်းတင်လို့ရတာလေးပါလို့ အထဲအတွင်းပိုင်းထဲမှာmini gps လေးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။
8.ကားနောက်ဖုံးခန်းအတွင်း(Inside the trunk) ဤနေရာသည်လည်း GPS Trackerများကို လူအများသတိမထားမိအောင် ဝှက်ထားဖို့အဆင်ပြေသောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ GPS Tracker များကို ကားများ၏လုံခြုံရေးအတွက်သာမက way plan များအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
💥Mini GPS Tracker လေးများကိုစိတ်ဝင်စားပါကအသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်မှဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://bit.ly/2O8rVhq
💥Strong Magnetic GPS လေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်မှ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://bit.ly/2D6OLzR
💥DPS မှ Promotion ဖြင့်ရောင်းချပေးနေသော GPS Tracker လေးရဲ့အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်မှဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ https://bit.ly/35tQ4Vt
🧡GPS Tracker လေးများကိုစိတ်ဝင်စားသူများ comment မှာ ဖုန်းနံပါတ်များချန်ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်နော်။န်းဆက်လိုက်ပါနော်။်....
မိုင်တွေဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး အနားမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားရဖို့ဆိုရင် မိမိရဲ့ကားလေးကိုDPS က Promotion ပေးရောင်းချနေတဲ့ GPS စက်လေးတပ်လိုက်ရုံပါပဲ
45% OFF 45000 ကျပ်တည်းနဲ့ GPS တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီလေ..... ဆိုင်ကယ်၊ ကားမည်သည့်ယာဉ်ကိုမဆို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များကို လုံခြုံရေးမြှင့်တင်လိုက်ပါ.... GPS စက်လေးရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံများကိုလည်း အားမနာတမ်း ဖတ်ရှုလိုက်ပါနော်.... 1.ယာဉ်၏တည်နေရာနှင့် သွားရာလမ်းကြောင်းကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်း 2.ခရီးသွားနေသော ယာဉ်၏ စုစုပေါင်းကီလို(Km)ကို Internetဖြင့် အချက်အလက်ရယူနိုင်ခြင်း 3.ယာဉ်ပေါ်မှအသံများကို ကြားနိုင်ခြင်း 4.အရှိန်နှုန်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ သွားစေချင်သော လမ်းကြောင်းကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း 5.သွားခဲ့ပြီးသော လမ်းကြောင်းများအားပြန်လည် ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်း 6.6volt power bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း 💯💯ကဲဒီလို အရည်အသွေးများကောင်းမွန်တဲ့ GPS စက်လေးကို 45000 ကျပ်တည်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့ ဆက်သွယ်မှာယူလိုက်တော့နော်...
"သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်သလို သင့်ကားကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပါပြီနော်"🤔🤔🤔 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝑮𝑷𝑺 လေးက ဘယ်လိုတွေကူညီပေးမှာလဲ❔❔❔စက်လေးတပ်လိုက်ရုံပါပဲ
✔️ Online GPS Tracker ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ကားကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှ တဆင့်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ ကြည့်လို့ရပါမယ်။
✔️ Online GPS မှာ MPT, Telenor SIM card ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။
✔️ယာဉ်နားခြင်း၊ထွက်ခြင်း၊ကြာချိန် စတာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
✔️ သွားလိုသောနေရာကို plan ဆွဲနိုင်ခြင်း၊ Speed, route စတာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
✔️Online ကနေလည်း playback ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
𝙊𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚 𝙂𝙋𝙎 𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠𝙚𝙧 လေးကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုတယ် ဆိုရင်>>>
Spot Gen3GPS Tracker လေးကြောင့်အန္တရာယ်မှလွတ်မြောက်သွားသော ပညာရှင်တစ်ဦး
Allison ဆိုသူသည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို လေ့လာသည့် အဖွဲ့အစည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Allison သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ဝေးလံသောဒေသများမှာ အချိန်ကြာကြာအလုပ်လုပ်တာများသည်။ Allisonသည် တောတောင်ဒေသများတွင် အနေများသူဖြစ်ပြီး ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာနှင့်အညီ ကိုသြဒိနိတ်များရှာဖွေရန်အတွက် GPS Trackerများကို အကျွမ်းတဝင် ရှိသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့မှာတော့ Aliison တစ်ယောက် အန္တရာယ်ရှိသော တောင်စောင်းများနှင့် သဲကျောက်တုံးများပြည့်နေသော Surveyဧရိယာကို လေ့လာနေသည်။ ခဏကြာတော့သူမသည် ပေါင်300လောက်ရှိတဲ့ကျောက်တုံးနှစ်ခုကြားကနေ ဖြတ်လျှောက်နေတုန်း ဘေးကမ်းပါးမှ ကြီးမားသောကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံး သူမရဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကိုပိကျသွားခဲ့သည်။ Allison တစ်ယောက်ကျောက်တုံးတွေကြားမှာ ကျော့ကွင်းမိသလိုဖြစ်သွားပြီး လွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း ကြီးမားသောကျောက်တုံးတွေကိုသူ မတွန်းလှန်နိုင်ပဲဖြစ်နေသည်။Allisonတစ်ယောက်တည်း တောင်စောင်းကျောက်တုံးများကြားမှာ အတွေးပေါင်းများစွာနှင့် ဘယ်သူမှ လာမကူညီနိုင်ဖြစ်နေတုန်း GPS စက်လေးမှာပါတဲ့ အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ SOS ခလုတ်လေးကိုသတိရပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ နောက်နှစ်နာရီလောက်ကြာတော့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များရောက်ရှိလာတာကို ချောက်အတွင်းမှမြင်ပြီး Allisonသည် သက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များလည်းကျောက်တုံးများကိုဖယ်ရှာပြီး Allisonကိုဆေးရုံးသို့သယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါသည်။ Allisonသည် ခြေထောက်ကျိုးမှုဝေဒနာကြောင့် ကောင်းမွန်သည့်တိုင်အောင် အနားယူခဲ့ရသည်။ သက်သာလာသည်နှင့် Aliisonသည် သူ့လုပ်ငန်းကိုပြန်သွားရန်ပြင်ဆင်ပါတော့သည်။ အကယ်၍ GPS Trackerလေးသာသူ(မ)အနားမှာ မရှိခဲ့ရင် သူ(မ)တစ်ယောက်တည်း ဝေဒနာကြီးစွာပိုခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် Spot GPS Tracker တီထွင်ခဲ့သူများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါသည်။ GPS Tracker အမျိုးမျိုးကိုDPS မှာသက်သာသောဈေးနှုန်းများဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဘယ်နေရာရောက်ရောက် ခြေရာခံမယ့် GPS Tracker
1. ပျံသန်းနေသည့် လေယာဉ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ မြင်ရပြီး ပျံသန်းခဲ့သည့်လမ်းကြောင်းများကို ပြန်လည်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
2. ပျံသန်းနေသည့်အမြင့်ပေ၊ အမြန်နှုန်းတို့လည်း သိရှိနိုင်ခြင်း၊ ပျံသန်းနေသည့်အမြင့်ပေ အပြောင်းအလဲဖြစ်လျှင် အချက်ပေး စနစ်ပါဝင်ခြင်း။
3. လေယာဉ်ဦးတည်ပျံသန်းနေသည့် လမ်းကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရ၍ လေယာဉ်လုံခြုံရေးအတွက်လည်း စိတ်ချရခြင်း။
4. Apple Device ၊ Android Device တို့နှင့် Spidertxt ကိုအသုံးပြုပြီးလေယာဉ်မှုးများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း။
5. လေယာဉ်Accident တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပါက SOS text message နှင့် emailကို အလိုအလျောက် ပို့ပေးနိုင်ခြင်း။
6. Iridium Satellite Network ကိုအသုံးပြုထား၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး နေရာအလွတ်မရှိ coverage ရှိခြင်း ။
7. Power ကြိုးတပ်လိုက်ရုံနဲ့ ချက်ခြင်း အလုပ်စလုပ်နိုင်ပါသည်။